1 Tantara 12 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 12
Ny mpiady nomba an'i Davida fony fahavelon'i Saola - Isan'ny mpiady nankany Hebrona, hampanjaka an'i Davida.
1Fony Davida mbola tsy maintsy nitoetra lavitra ny tavan'i Saola zanak'i Kisa, dia ireto no tonga nankeo aminy tao Sikelega: anisan'ny mahery nanampy azy nandritra ny ady izy ireo. 2Mpandefa tsipìka zatra manavia manavanana raha mandefa vato, zatra mandefa zana-tsipìka amin'ny tsipìkany; avy amin'ny rahalahin'i Saola, amin'i Benjamina: 3Ahisera no lohany, dia Joasa, zanak'i Samaà, any Gabaà; Jaziela sy Faleta, zanak'i Azmota; Barakà, Jehò avy any Anatota; 4Samaiasa avy any Gabaona, lehilahy mahery isan'ny telo-polo lahy sy lehiben'ny telopolo lahy; Jeremia; Jeheziela; Johanàna; Jezabada avy any Gederà; 5Elozaì; Jerimota; Baalià; Samarià; 6Safatià avy any Harofa; Elkanà, Jesià, Azareela, Joesera ary Jesbaama zanak'i Kore; 7Joela sy Zabadià zanak'i Jerohama avy any Gedora.
8Tamin'ny Gadita, nisy lehilahy mahery nanatona an'i Davida tany amin'ny toerana mimanda, tany an'efitra; mpiantafika zatra ady, mahay mampiasa ampinga aman-defona, miendriky ny liona, faingam-pandeha toy ny gazela eny an-tendrombohitra. 9Ezera no lohany, Obdiasa no faharoa, 10Eliaba no fahatelo, Maamana no fahefatra, 11Jeremia no fahadimy, Etì no fahenina, 12Eliela no fahafito, Johanàna no fahavalo. 13Elzebada no fahasivy, Jeremia no fahafolo, Makabanaì no faharaik'ambin'ny folo. 14Taranak'i Gada izy ireo, lehiben'ny foloalindahy, ny iray kely indrindra aminy maharesy zato lahy; ary ny iray lehibe indrindra, maharesy arivo lahy. 15Izy ireo no nita an'i Jordany, tamin'ny volana voalohany, fony izy nihoatra ny morony rehetra, ka nampandositra ny mponina rehetra teny amin'ny lohasaha na any atsinanana na any andrefana.
16Nisy nanatona an'i Davida tany amin'ny toerana mimanda kosa ny taranak'i Benjamina sy Jodà. 17Nivoaka hitsena azy ireo Davida sady niteny, nanao taminy hoe: Raha hevi-pihavanana no ahatongavanareo atý amiko, mba hanampy ahy, dia hitongilana aminareo ny foko hikambanantsika, fa raha hamadika sy hanolotra ahy amin'ny fahavaloko kosa, nefa tsy misy an-keriny nataon'ny tànako dia ny Andriamanitry ny razantsika no aoka hijery sy hamaly izany. 18Ary Amasaì, lehiben'ny telopolo lahy, dia nosaronan'ny Fanahy, ka nanao hoe: Anao izahay ry Davida, ary momba anao, ry zanak'Isaia! Fiadanana, fiadanana anie ho anao, ary fiadanana anie ho an'izay manampy anao, fa ny Andriamanitrao efa nanampy anao. Dia noraisin'i Davida izy ireo, ary nomeny toerana tamin'ny lehiben'ny antokon'ny miaramila.
19Nisy lehilahy sasany tamin'i Manase nikambana tamin'i Davida fony izy niaraka tamin'ny Filistina nandeha hiady amin'i Saola. Nefa tsy nanampy ny Filistina nalefa nody Davida, fa hoy izy: Ny lohantsika no mety hahita loza hiverenany amin'i Saola tompony. 20Raha niverina tany Sikelega izy dia nisy olona avy amin'i Manase, nanatona azy: Ednasa, Jozadaba, Jedihela, Mikaela, Jozadaba, Eliao ary Sabataì, tompon'arivo amin'i Manase ireny. 21Nanampy an'i Davida hamely ny andian-jirika izy ireo, fa samy lehilahy mahery ka tonga lehibe tamin'ny foloalindahy. 22Koa isan'andro isan'andro no nisy olona tonga tao amin'i Davida hamangy azy, mandra-pahatongany ho tafika lehibe toy ny tafik'Andriamanitra.
23Izao no isan'ny lehiben'ny lehilahy hary fiadiana hoenti-miady, tonga nanatona an'i Davida, tany Hebrona, mba hamindra ny fanjakan'i Saola aminy araka ny didin'ny Tompo.
24Tamin'ny taranak'i Jodà, valon-jato amby enina arivo lahy mitondra ampinga aman-defona, hary fiadiana mba hiady. 25Tamin'ny taranak'i Simeona, zato amby fito arivo lahy, samy lehilahy mahery an'ady. 26Tamin'ny taranak'i Levì, enin-jato sy efatra arivo lahy. 27Ary Joiada lehiben'ny taranak'i Aarona, ary fiton-jato sy telo arivo lahy no niaraka taminy. 28Ary Sadaoka zatovo mahery mbamin'ny fianakavian-drainy, dia filohany roa amby roapolo. 29Avy amin'ny taranak'i Benjamina, rahalahin'i Saola, telo arivo lahy; fa ny ankabeazan'ireo, hatramin'izay, mbola niraiki-po tamin'ny fianakavian'i Saola ihany. 30Tamin'ny taranak'i Efraima, valon-jato amby roa alina, samy lehilahy mahery sy malaza any amin'ny fianakavian-drainy avy. 31Avy amin'ny antsasa-pokon'i Manase valo arivo sy iray alina, voatendry tamin'ny anarany no avy hampanjaka an'i Davida. 32Avy tamin'ny taranak'Isakara izay nahafantatra ny andro hahalalàna ny tokony hataon'Israely, roan-jato lahy samy lohany, mbamin'ny rahalahiny rehetra ambany fahefany. 33Avy amin'i Zabolona, dimy alina, samy azo alefa amin'ny tafika, vonon-kiady, efa hary fiadiana tsara mihitsy, mba hilahatra hiady amin'ny fo tsy miroahana. 34Avy amin'i Neftalì, filohany arivo; ary fito arivo amby telo alina mitondra ampinga sy lefona, no niaraka taminy. 35Avy amin'ny Danita enin-jato amby valo arivo sy roa alin-dahy vonon-kiady. 36Avy amin'i Asera efatra alina, samy azo alefa amin'ny tafika sy vonon-kiady. 37Ary ny avy any an-dafin'i Jordany, amin'ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasa-pokon'i Manase, roa alina sy iray hetsy lahy, hary fitaovana enti-miady tsara mihitsy.
38Ireo lehilahy mpiady rehetra ireo, izay samy nahay nilahatra hiady avokoa, dia tonga tao Hebrona, tamin'ny fo mahitsy hanangana an'i Davida ho mpanjaka amin'Israely rehetra, ary Israely sisa rehetra koa, dia niray fo torak'izany hanangana an'i Davida ho mpanjaka. 39Hateloana izy ireo no nitoetra tao niaraka tamin'i Davida, dia nihinana sy nisotro, fa efa nanomana vatsy ho azy ny rahalahiny. 40Ary na dia izay nitoetra tao anilany aza hatramin'Isakara sy Zabolona ary Neftalì samy nampitondra hanina, netin'ny ampondra aman-drameva mbamin'ny omby sy ny mole, dia lafarina, ampempan'aviavy maina amam-boaloboka maina, divay, diloilo, omby aman-ondry sesehena, satria nisy fifaliana tamin'Israely. >